Madaxweynaha Shirshabeelle Oo Magacaabay 47 Wasiir iyo Xubno Shaaciyay In Ay Iscasileen | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Madaxweynaha Shirshabeelle Oo Magacaabay 47 Wasiir iyo Xubno Shaaciyay In Ay Iscasileen
Jawhar (SDWO): Madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waarre, ayaa maanta soo dhisay xukuumadda cusub ee golihiisa wasiirrada oo ay tiradoodu gaadhayso ku dhawaad konton xubnood.
Magacaabista golahan wasiirrada madaxweyne Waarre, oo mudooyinkan-ba si weyn looga dhur-sugayay ayaa maanta waxa uu magaaladda Jawhar ee xarunta ku-meel gaadhka u ah maamulkiisa waxa uu kaga dhawaaqay 20 wasiir, 20 wasiir ku-xigeen iyo 7 wasiiru-dawle, taasoo golihiisan wasiirrada ka dhigaysa 47 wasiirr.
Kuwaasoo laba ka mid ah ay yihiin dumar, iyadoo weliba 20-ka wasiirr aanay ku jirin mid keliya oo dumar ah, arrintaasi oo isla markiiba keentay hadal hayn ah in bulshadu ay si weyn wax isaga waydiiso saamiga uu haweenka ka siiyay.
Labadan xubnood ee dumarka waxay kala yihiin wasiiru-dawlaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshadda Sacdiya Maxamed Nuur, iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqadda iyo shaqaalaha Ubax Xaashi Odowaa.
Waxaana muuqata in aanu madaxweyne Waarre, wax tixgelin ah siininn arrimaha haweenka, maadaama oo aanay 20-ka wasiirr ee xukuumadiisa gebi ahaanba ku jirin wax dumar ah.
Halka taa bedelkeedda keliya la siiyay wasiiru-dawle iyo wasiir ku-xigeen. Taasoo macnaheedu yahay in gole wasiirro oo ka kooban 47 xubnood dumarka laga siiyay 2 xubnood oo keliya, 45-ka kale-na ay yihiin rarg.
Wasaaradaha waaweyn sida wasaaradda maaliyadda iyo dhaqaalaha oo kale waxaa loo magacaabay nin magaciisa la yidhaahdo Maxamed Cabdulle, wasiirka qorshaynta, maalgashiga iyo is-kaashiga caalamiga ah waxaa loo magacaabay C/raxmaan C/laahi Macalin.
Sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha, amniga iyo dawladaha hoose ee maamul goboleedka Hirshabeelle waxaa loo magacaabay Maxamed Cali Caadle, oo hore xilkaasi u hayay xukuumadii tan ka horaysay ee madaxweynihii xilka laga tuuray Cali C/laahi Cosoble.
Geesta kale waxaa la sheegay in golahan wasiirrada cusub ee uu maanta soo saaray madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waarre, ay ku jiraan xubno hore wasiirro uga ahaa xukuumadii madaxweynihii hore Cali Cosoble.
Waxa kaloo la sheegay in xukuumadan madaxweyne Waarre, ay wasiirrada ku jiraan xubno ka mid ah baarlamaanka maamulkaasi.
Madaxweyne Waarre ayaa markii hore la filayay in uu soo dhiso gole wasiirro oo aad u kooban tiro ahaan oo aan ka badnayd 15 ilaa 16 wasiirr, oo aanay sidoo kale ku jirin xildhibaano baarlamaanka ku jira.
Hase yeeshee, cadaadis la sheegay in uu kaga yimid madaxweynaha dhinaca beelaha iyo xildhibaanadda laftoodda uu sababay in wasiirrada xildhibaano baarlamaanka ka tirsan lagu soo darro, sidoo kale-na golaha wasiirrada la balaadhiyo.
Madaxweyne Maxamed Cabdi Waarre, ayaa la doortay 16-kii bishii September ee sanadkan iyadoo maanta-na ay taariikhdu marayso 29-ka November, taasoo muujinaysa in ay ku qaadatay muddo laba bilood iyo dheeraad ah in uu soo magacaabo golle wasiirro.
Dhinaca kale waxaa la soo sheegay in wasiiru-dawlihii wasaaradda Boostadda iyo is-gaadhsiinta oo ka mid ahaa xubnaha maanta la magacaabay Ismaaciil Maxamed Culusow, uu isla galabta xilkaasi iska casilay, isagoo ku dooday in aan lagala tashan xilkaasi loo magacaabay.
Inkastoo wararka qaarkood ay sheegayaan in ninkaasi uu saluugay awoodda xilka iyo saami-qaybsiga beeshiisa laga siiyay xukuumadan cusub. Tallaabadaasi oo noqonaysa fal-celintii ugu horaysay oo ka timaadda xukuumadan tiradda badan ee uu maanta magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdi Waarre.